प्याजको पत्रमा लुकेको हाम्रो कमजोरी :: रोशन सिग्देल :: Setopati
प्याजको पत्रमा लुकेको हाम्रो कमजोरी प्याजको मुल्य कात्तिकमै किन बढ्छ?
रोशन सिग्देल काठमाडौं, कात्तिक २७
पछिल्लो समय तरकारी बजारमा प्याज महँगियो। मंगलबार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजरमा प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ।
यो वर्ष मात्रै होइन गत वर्ष पनि कात्तिकको अन्तिम हप्ता यसैगरी आकाशिएको थियो। त्यतिबेला कालिमाटी बजारमा प्रतिकेजी प्याजको भाउ १ सय २५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क पनि यो वर्ष वा गत वर्षको भन्दा फरक छैन। २०६४ सालमा असोजको अन्तिम हप्ता प्याजको भाउ ५० रुपैयाँ बाट बढेर मंसिर १० मा १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको थियो।
२०७३ सालमा भने प्याजको मूल्यमा त्यति धेरै उतारचढाव देखिएन। ३० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बिकिरहेको प्याज कात्तिकको अन्तिममा २० रुपैयाँ बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको थियो। अन्य वर्षको तुलनामा त्यो वर्ष अन्य समयमा पनि प्याजको मूल्य ३० रुपैयाँकै आसपास थियो।
नेपाली बजारमा एक केजी प्याजको भाउ औषत ३० देखि ४० रुपैयाँ पर्छ। कात्तिकमा भने सँधै त्यो भन्दा बढी देखिन्छ।
कालिमाटी बजारले निर्धारण गरेको प्याजको मूल्य हेर्दा प्राय असोजदेखि मूल्य बढ्न थालेको देखिन्छ। विस्तारै बढ्दै कात्तिकको अन्तिम र मंसिरको पहिलो हप्ता सबैभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसपछि विस्तारै घट्दै फागुनमा औषत मूल्यमा झर्छ।
किन कात्तिकमै बढ्छ प्याजको भाउ?
यसका दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो कात्तिक महिना प्याजको 'अफ सिजन’ हो— पुरानो प्याज सकिने र नयाँ प्याज रोप्न शुरु हुने महिना।
कृषि विभागका सुचना अधिकारी रामकृष्ण श्रेष्ठ बर्षा सकिएसँगै असोजदेखि प्याज रोप्ने सिजन सुरु हुने बताउछन्।
‘ठाउँअनुसार कतै भदौको अन्तिममा र कतै असोज महिनाभरि प्याज रोपिन्छ। प्याज तयार हुन तीन महिना लाग्छ, त्यसपछि बजारमा विस्तारै प्याज आउन थालेपनि प्याजको मूल्य घट्न थाल्छ’ उनले भने।
अघिल्लो वर्षको उत्पादन निख्रिने र यो वर्षको नयाँ उत्पादन बजारमा आइनसकेकाले यो महिना भाउ सँधै उकालो लाग्ने गरेको व्यवसायीहरुको पनि भनाइ छ। बजारको माग उही हुने तर उत्पादन कम हुँदा आपूर्ति घट्नाले भाउ बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खुमप्रसाद घिमिरे पनि यो समयमा पुरानो प्याज सकिएको र नयाँ प्याज बजारमा आइनसकेका कारणनै मूल्य बढेको बताउछन्।
नेपालमा गोदाम स्टकको तथ्यांक कतै पनि नहुने भएकाले माग र आपूर्तिको विषय यकिनका साथ भन्न सकिन्न।
भन्छन्, विषय प्याजको पत्र जसरी केलाउनु पर्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रका कमजोरी प्याजका पत्रैपत्र जसरी नै लुकेका छन्। नेपालले आफूलाई चाहिने प्याजको १० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्छन्। त्यसैले हाम्रो भान्सामा पाक्ने ९० प्रतिशत प्याज भारतमा उत्पादन भएको हो।
भारतीय प्याजको दबदबा नेपालमा भएपछि यसको मुल्यको निर्धारण पनि भारतीय बजारलेनै गर्नेभयो। भारत र नेपालमा प्याज फल्ने सिजन उस्तै हो।
सिमापारी पनि कात्तिक महिना लाग्दा नलाग्दा पुरानो प्याज निख्रन्छ र नयाँ प्याज रोप्ने सिजन शुरु हुन्छ। भारतको नासिक, इन्दौर कानपुर, चण्डीगढ, लखनउ क्षेत्रमा प्याजको उत्पादन धेरै हुन्छ।
भारतीय बजारमा प्याजको ‘स्टक' सकिदै गएपछि सरकारले मध्य असोज देखि देखिनै प्याज निर्यातमा रोक लगाएको थियो। प्याजको अभाव हुन नदिन दिल्ली सरकारले एक पटकमा एक जनालाई ५ किलोसम्म विक्री गर्ने सिमा समेत तोकेको छ ।
भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपनि खुल्ला सिमाका कारण नेपाली बजारमा अहिले पनि भारतबाट प्याज आउने क्रम भने नरोकिएको स्वयम् व्यवसायीहरु बताउछन्।
तर भारतमै पनि प्याज महँगो भएकाले त्यसैको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको छ।
मंगलबार नयाँ दिल्लीमा एक केजी प्याजको मूल्य ७६ भारतीय रुपैयाँ थियो । त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा भन्दा १ सय २१ हुन्छ । यसअघि भने यो समयमा भारतमा औसत ३० रुपैयाँमा प्याज पाइने गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष घिमिरे यो वर्ष भारतमै उत्पादन घटेकाले मूल्य बढेको बताउछन् ।
‘गत वर्ष सिजनमा भारतमै ७५ प्रतिशत सम्म प्याजको उत्पादन घटेको थियो, त्यसैले भारतमै प्याजको पूर्ति कम भयो र मूल्य बढ्यो,’ उनले भने, ‘अब २० देखि २५ दिनमा नयाँ प्याज बजारमा आउछ त्यसपछि सस्तो हुन्छ।’
भारतीय संचार माध्यमहरुले पनि गत वर्ष प्याज खन्ने सिजनमा पानी परेकाले प्याजको उत्पादनमा कमी आएको बताइरहेका छन्। उत्पादन कम भएकै कारणले भारतीय बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हो।
यो समयमा प्याजको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण भनेको भण्डारण गृहको अभाव हुनु हो।
‘नेपालमा प्याज भण्डार गर्नको लागि अहिले सम्म भन्डारगृहनै छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अन्य चिस्यान गृहमा प्याजलाई भन्डार गर्न नमिल्ने भएर पनि यसको भन्डारण गर्न नसकिएको हो।’
उनका अनुसार प्याज भन्डारणको लागि सन्तुलित तापक्रम चाहिन्छ। थोरैमात्रै तापक्रममा तलमाथी हुँदा प्याज विग्रीने उनले बताए।
उनी सिजनमा प्याज धेरै उत्पादन हुँदा भण्डारण गर्न सके अफ सिजनमा प्याजको अभाव नहुने र त्यसले मूल्य पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। अध्यक्ष घिमिरे भने भण्डारण गर्दा घाटा हुने भएकाले भण्डारण गर्न नसकिने बताउछन्।
‘केही वर्ष अघि हामीले भण्डारण गरेर राखेका थियौ, तर अफ सिजनमा भण्डारण गरेको प्याज भन्दा भारतबाट सस्तोमा आएर घाटा लाग्यो,’ उनले भने।
प्याजको पत्र खोतल्दा देखिएको यो कमजोरी नेपाली अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ। भारत ठुलो बजार छ— त्यहाँ उत्पादन धेरै हुन्छ र लागत थोरै।
त्यसैले हाम्रा उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
कृषि देखि उद्योग क्षेत्र सम्म हाम्रा उत्पादन बढाउन र भारतीय प्रतिस्पर्धामा टिकाउन हामीलाई छुट्टै रणनीति चाहिन्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६, ०१:५९:००